'कोभिड–१९' सँग बच्न सतर्कता खोई ? - साक्षी खबर 'कोभिड–१९' सँग बच्न सतर्कता खोई ? - साक्षी खबर
भदौ ०४, २०७७ | ६२४ पटक पढिएको
कोभिड–१९ का कारण देशको हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । कोभिडसँग बच्नका लागि हरेक नागरिक उत्तिकै सर्तक बन्न जरुरी छ । एउटा मानिस मास्क लगाउनुहोस् भन्दै सडकमा हिडिरहेको हुन्छ । अझ भनौ समाजमा आफूलाई सभ्य, बुद्धिजीवी ठान्ने वर्गबाटै मास्क नलगाई हिडिरहेको देख्छौ । सामाजिक दुरी कायम गरिएको छैन । यातायातका साधनहरु भरिभराउ अवस्थामै रहेका छन् । सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा सुरक्षाका कुनै पनि विधि अपनाइएको देखिदैन । एउटा सङ्क्रमित काठमाडौबाट दाङसम्म कुनै बाधा अवरोध सिधै आउन सक्दछ ।
समयको दौरानमा दिनप्रति दिन कोभिड–१९ का कारण मर्ने र सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ । नजिकिदै गरेका चाडपर्वहरुको रमझममा बजारहरुका भीडभाड रहेको छ । आज बाचे अर्को वर्ष चाडपर्वहरुमा रमाइलो गरौला तर आज रमाइलो गर्दा जीवन नै जोखिममा पार्नु पक्कै पनि जायज होइन । प्रहरीका लागि मास्क लगाउने होइन आफ्नै सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने हो । अत्यावश्यकीय काममा बाहेक बिना काममा लखर लखर बजार दौडेर सङ्क्रमणसँग नजिकिनु मात्रै हो । कोरोना आफू आउँदैन हाम्रा क्रियाकलापहरुले कोरोनालाई निमन्त्रणा दिइरहेका छौ । कम्तिमा सामान्य सर्तकताका उपायहरु अपनाउँदा हुन्छ ।
भीडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, दुरी कायम गरेर हिड्ने, कुनै ठाउँबाट घरमा पुग्दा साबुन पानीले हात धोएर मात्रै घरभित्र प्रवेश गर्ने जस्ता सामान्य कुराहरुलाई पालना गर्न सक्यौ भने कोभिड–१९ सँग बच्न सकिन्छ । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ हाम्रा जनप्रतिनिधि, नेतृत्वकर्ताहरुले सभा समारोहमा भाषण छाट्दै हिड्नुहुन्छ अनि कसरी बच्ला जनताको जिउ ज्यान । तसर्थ कोभिडसँग बच्नका लागि आफै जुटौं ।